Tamin'ny volana Mey 2021, ny mpanjifa Hong Kong izay nanafatra vokatra famonoana otrikaretina avy amin'ilay orinasa dia nandidy ny famafana tavy fanadiovan-tena avy amin'ny orinasa. Noho ny fiaraha-miasa teo aloha dia nandeha tamim-pilaminana ny filaharana fanesorana ny fanadiovan-tsakafo ho an'ny fanadiovana. Nandritra ny fiaraha-miasa tamin'ny Hon ...Hamaky bebe kokoa »
Yantai Haicheng Sanitary Products Co., Ltd. dia orinasa marina manana mari-pahaizana feno sy voninahitra maro. 17 taona mahery ny orinasa no eo amin'ny fampandrosoana ary efa niara-niasa akaiky tamin'ny orinasa maro. Betsaka koa ny fifanakalozana miaraka amin'ireo fikambanam-barotra lehibe. Ao amin'ny ex ...Hamaky bebe kokoa »
Ny gel famonoana otrikaretina tanana manohitra ny bakteria dia gel famonoana otrikaretina azo alefa, izay vokatra famonoana otrikaretina vaovao novolavolain'ny orinasanay tamin'ny taona 2020. Mety hamono bakteria sy viriosy an-tanana amin'ny fomba mahomby izy io. Izy io dia gel antibaktera malala-tontolo iainana, izay tsy mahasosotra ny olombelona ...Hamaky bebe kokoa »
Ny fampiasana fomba famonoana otrikaretina famonoana otrikaretina
Raha jerena ireo rafi-pamokarana sy famonoana otrikaretina isan-karazany dia tokony hofidina ireo otrikaretina simika sahaza azy ireo, ary ireo otrikaretina mahery vaika toy ny fatran'ny klôro dia ampianarina. Amin'ny toerana fanadiovana ny ambonin'ny zavatra, ny famafazana sy ny famafana no ampiasaina matetika. Th ...Hamaky bebe kokoa »
Safidin'ny mpanadio tanana
Amin'izao fotoana izao, ny mpanadio tanana eny an-tsena dia azo zaraina ho sokajy roa. Ny iray dia ny fanadiovan-tànana tsotra, izay an'ny kosmetika ary mitana ny anjara asan'ny fanadiovana sy ny fandotoana azy ihany. Karazan'asan'ny fanadiovan-tanana hafa dia misy akora miady amin'ny bakteria na bakteria, izay an'ny disi ...Hamaky bebe kokoa »
Safidio ny safoara lena
Betsaka ny mpanamboatra soloina lena eny an-tsena, arakaraka ny mari-pahaizana isan-karazany an'ny mpanamboatra tsirairay, mifanaraka amin'ny famokarana sokajy samihafa amin'ny vokatra famafana lena. Amin'izao fotoana izao, ny famaohana lena mahazatra eny an-tsena dia manana tavy mando madio, solo-drano madio, disinfectio ...Hamaky bebe kokoa »
Manemotra ny safidin'ny famatsiana ny olon-dehibe
Raha ny fanadihadiana natao momba ny fitsaboana, ny ejaculation aloha loatra amin'ny marary hoditra somary ara-dalàna dia manaloka hoditra marefo sy marefo, mifandray aorian'ny firafitry ny famafazana, ny firafitra amin'ny vatan'ny spaonjy zana-boaly, manamaivana ny fihenan-tsain'ny filohan'ny penis, mampihena ny ...Hamaky bebe kokoa »